Wararka Maanta: Jimco, May 17, 2019-Wabiga Shabeelle oo ku fatahay qeybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe
Dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in Wabiga uu ku fatahay deegaanka Buulo Axmed Cigow oo duleedka ka ah degmda Mahadaay, waxaana wararka halkaa ka imanaya sheegayaan in uu geystay khasaare maaliyadeed.
Dad ku sugan degmada Mahadaay ayaa waxaa ay sheegeen in Wabiga dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ay ku soo kordhayeen biyo,taas oo keentay in ugu dambeyn uu xalay fatahaad ka sameeyey tuulada Buulo Axmed Cigow .
Fatahaadan ayaa baabi'isay beero ay ku abuurnaayeen dalagyo kala duwan,sidoo kale guryo ay deganaayeen dad Shacab ah, islamarkaana dadka badi ay ka barakaceen Buulo Axmed Cigow .
Wabiga Shabeellaha ayaa labada xili roobaad inta badan karkaarada jabsaday isaga oo khasaare u geystay dadka iyo duuniyada ku dhaqan deegaannada biyuhu ku fatahaan.
5/17/2019 11:42 AM EST
Jimco, May, 17, 2019 (HOL)- Hay'adda Hormuud Foundation tan iyo markii bilaabatay bisha barakeysan ee Ramadaan ku howlaneyd qeybita gargaar kala duwan ayaa Deeq Rashiin gar gaar ah u qeybiyay Qaar ka mid ah Qoysaska Dadka laga tira badan yahay ee ku dhaqan Magaaladda Muqdisho iyo Daafaheeda.